SANTHITSA - Page5of 217 - NEWS & MEDIA
တနင်ျလာ သားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၂၂ခုနဈ တနှဈစာ ဟောစာတမျး
တနင်ျလာ သားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၂၂ခုနဈ တနှဈစာ ဟောစာတမျး တနလျာသားသမီးမြားတို့သညျ ဦးတညျခကျြပွောငျးလဲပွိး လုပျငနျးမြား လုပျရတတျသညျ။ မကွာခဏ ခရီးသှားရကိနျး ရှိသညျ။ မမြျောလငျ့ဘဲ ငှေးကွေးမြား ဝငျရောကျခွငျး၊ ထီပေါကျခွငျးမြား ရှိမညျ။ အက်ခရာ – (ဟ. စ. လ. အ) အစပါ နာမညျနာမျမြားနှငျ့ လုပျငနျးဆောငျရှကျခွငျးမြား အထူးအကြိူးပေးမညျ။ (15. 4. 2022 မှ 15. 6. 2022)အထိ လူမြိူးကှဲ၊ ဘာသာကှဲမြားနှငျ့ လုပျငနျးစပျတူ ပွုလုပျလြှငျ အောငျမွငျမညျ။ သို့သျော အပွိုငျအဆိုငျမြားကွောငျ့ အနှောကျအယှကျမြား ဝငျလာတတျသညျ။ ယခုနှဈတှငျ (3)လပိုငျး၊(8)လပိုငျး၊(10)လပိုငျး ထိုလမြားတှငျ လုပျငနျးသဈမြားတိုးခြဲ့ခွငျး၊နရောပွေားရှမြေ့ားနှငျ့ မညျ့သညျကိစ်စ လုပျငနျးမြားဆောငျရှကျခွငျး အထူးဂရုစိုကျပေးပါ။ …
ကျနော့်ကို ဘာဖြစ်လို့ နောက်တန်းမှာ ကစားခိုင်းတာလဲကို ကျနော်မသိပါဘူး လို့ လိဒ်ကွင်းလယ် စတားဆို
ကျနော့်ကို ဘာဖြစ်လို့ နောက်တန်းမှာ ကစားခိုင်းတာလဲကို ကျနော်မသိပါဘူး လို့ လိဒ်ကွင်းလယ် စတားဆို မောင်ယဿ ( နိုဝင်ဘာ ၂၂ ) မနေ့ညက ကစားခဲ့တဲ့ ပရီမီးယာလိဂ်ပွဲစဉ် ၁၂ စပါးနဲ့ လိဒ်ပွဲမှာ အိမ်ရှင်စပါးက လိဒ်ကို ( ၂ – ၁ ) ဂိုးနဲ့ အနိင်ရရှိသွားပါတယ်။ ပွဲအပြီး အင်တာဗျူးမှာ လိဓ်ကွင်းလယ်ကစားသမား ကယ်လ်ဗင်ဖိလစ်က သူ့ကို နည်းပြဖြစ်သူ မဆယ်လို ဘီအယ်ဆာက ဘာကြောင့် နောက်တန်းမှာ ကစားခိုင်းလဲဆိုတာကို မသိပါဘူး လို့ ဆိုသွားပါတယ်။ မနေ့က ပွဲမှာ စပါးက ဟာရီကိန်းကို အထောင်ထားပြီး ၃ – ၄ …
မန်ယူနည်းပြ အဖြစ် ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ ဇီဒန်းနဲ့ မန်ယူကို နည်းပြချင်တယ် ဆိုတဲ့ ပိုချက်တီနို
မန်ယူနည်းပြ အဖြစ် ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့ ဇီဒန်းနဲ့ မန်ယူကို နည်းပြချင်တယ် ဆိုတဲ့ ပိုချက်တီနို ရီးရဲလ်မက်ဒရစ်နည်းပြဟောင်း ဇီဒန်းကတော့ မန်ယူအသင်းရဲ့ နည်းပြသစ်အဖြစ်ကမ်းလှမ်းခဲ့မှုကို ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကမှ ဆိုးရှားကို ထုတ်ပယ်ခဲ့ပြီး နည်းပြသစ်အဖြစ် ဇီဒန်းကို ကနဦးဆုံးကမ်းလှမ်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ဇီဒန်းကတော့ ငြင်းပယ်ခဲ့ပါတယ်။ ဇီဒန်း မန်ယူအသင်းနည်းပြရာထူးကို ငြင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့ ပြင်သစ်လိဂ်ဝမ်းကလပ် ပီအက်စ်ဂျီအသင်းကို နည်းပြပေးဖို့တော့ စိတ်ဝင်စားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ​ပီအက်စ်ဂျီအသင်း လက်ရှိနည်းပြပိုချက်တီနိုကလည်း ပြင်သစ်မြေမှာ မပျော်ရွှင်တော့ပဲ မန်ယူအသင်းကို ပြောင်းရွှေ့လိုနေတယ်လို့ဆိုတာကြောင့် မန်ယူလိုချင်နေတဲ့ ဇီဒန်းက ပီအက်စ်ဂျီကို သွားချင်၊ ဇီဒန်းသွားချင်နေတဲ့ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းရဲ့ နည်းပြပိုချက်တီနိုကတော့ မန်ယူကိုသွားချင်နဲ့ သတင်းတွေက လိမ့်ပတ်လည်နေပါတယ်။ ပိုချက်တီနိုဟာ ပီအက်စ်ဂျီအသင်းရဲ့ စတားကစားသမားတွေဖြစ်တဲ့ …
လီဗာပူး ကို ရှုံးတာများ အဲ့လောက်ပေါက် ကွဲစရာမလိုပါဘူးလို့ ဝီးရှား ပြော
လီဗာပူး ကို ရှုံးတာများ အဲ့လောက်ပေါက် ကွဲစရာမလိုပါဘူးလို့ ဝီးရှား ပြော မောင်ယဿ ( နိုဝင်ဘာ ၂၂ ) ပရီးလိဂ် ပွဲစဉ် ၁၂ လီဗာပူးနဲ့ အဆင်နယ်ပွဲမှာ လီဗာပူး က အာကြီး ကို ( ၄ – ၀ ) ဂိုးနဲ့ အိမ်ကွင်းမှာ အနိုင်ယူခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒိပွဲမှာ အာဆင်နယ်မန်နေဂျာ အာတီတာ တစ်ယောက် ရေရေလည်းပေါက်ကွဲခဲ့လို့ အာဆင်နယ် ကွင်းလယ်ဟီးရိုးဟောင်း ဂျက်ဝီးရှားက အဲ့လောက်ကြီး ပေါက်ကွဲစရာမလိုပါဘူးလို့ ဆိုလိုက်တာပါ။ လီဗာပူးက အာကြီး ၈ပွဲဆက် ရှုံးပွဲ မရှိစံချိန်ကို ရိုက်ချိုးလိုက်တာပါ။ ပထမပိုင်းမှာ ၃၉ မိနစ်မှာ လီဗာပူး …
မန်ယူကို အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးပြီးမှ ထွက်ခွာလာခဲ့တာပါလို့ ဆိုးလ်ရှားဆို
မန်ယူကို အကောင်းဆုံးအသင်းဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးပြီးမှ ထွက်ခွာလာခဲ့တာပါလို့ ဆိုးလ်ရှားဆို ရလဒ်ပိုင်းတွေ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ဆိုးရွားပြီနောက် တန်းတက်ဝက်ဖို့ဒ်ကို (၄-၁) ရလာဒ်နဲ့ ရှုံးနိမ့်အပြီးမှာတော့ ဆိုးရှားလ်တစ်ယောက် အထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။ အသင်းနဲ့ လမ်းခွဲအပြီးမှာတော့ ဆိုးရှားလ်က မန်ယူအသင်းကို သူစတင်လက်ခံရရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကထက် ပိုမိုအင်အားတောင့်တင်းကောင်းမွန်တဲ့အသင်းဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးထားခဲ့ပြီး လက်ရှိမန်ယူအသင်းဟာ အဓိကဆုဖလားတွေ အရယူဖို့ အသင့်ဖြစ်ပြီလို့ ဆိုလိုက်ပါတယ်။ သူအနေနဲ့ မန်ယူအသင်းကို နှစ်ရာသီတိုင် ပရီးမီးယားလိဂ် အဆင့် ၂ နဲ့ ၃ နေရာရပ်တည်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး လက်ရှိရာသီမှာတော့ ရလဒ်ပိုင်းဆိုးရွားမှုနဲ့အတူ အဆင့် ၈ နေရာမှာ ရပ်တည်နေကာ ဇယားထိပ်ကချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့လည်း ရမှတ် ၁၂ မှတ်အထိ ကွာဟနေခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ MU TV နဲ့ အင်တာဗျူးမှာ …
လက်ဖက်ခြောက်ကို မှုးယစ်ဆေးဝါးလို့ ထင်ပြီး သားအမိ၂ယောက်ကို သြစတေးလျှ ရဲတွေဖမ်း ၊ ထောင်ထဲမှာ ၄လနေလိုက်ရ
လက်ဖက်ခြောက်ကို မှုးယစ်ဆေးဝါးလို့ ထင်ပြီး သားအမိ၂ယောက်ကို သြစတေးလျှ ရဲတွေဖမ်း ၊ ထောင်ထဲမှာ ၄လနေလိုက်ရ မောင်ယဿ ( နိုဝင်ဘာ ၂၁ ) ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရေ ပြီးရင် လူတွေအသောက် အများဆုံး ဖျော်ရည်က လက်ဖက်ရည်ပါပဲ။ လက်ဖက်ရည်တွေ လူတွေနှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက် သောက်ကြသလို ဘယ်နိုင်ငံ မှာ မဆို လက်ဖက်ခြောက်သယ်ယူခွင့်နဲ့ ပက်သက်ပြီး တားမြစ်ထားခြင်းမရှိ ကြပါဘူး ။ ဒါပေမဲ့ ကံဆိုးတဲ့ သားအမိ ၂ယောက်ကတော့ လက်ဖက်ခြောက်သယ်လာလို့ ရဲက မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုပြီး မှားဖမ်းကာထောင် ထဲမှာ ၄လ ချုပ်ထားခဲ့တာကို ခံလိုက်ရပါတယ်။ ကော်နီချောင်နဲ့ မယ်လာနီ တို့ သားအမိ ၂ယောက်က မလေးရှားနိုင်ငံကို …
တနင်ျဂနှေ သားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၂၂ခုနဈ တနှဈစာ ဟောစာတမျး
တနင်ျဂနှေ သားသမီးမြားအတှကျ ၂၀၂၂ခုနဈ တနှဈစာ ဟောစာတမျး ဤနှဈ (14.4.2022)မှ စ၍ မိမိလုပျကိုငျခငျြသော ကိစ်စမြား ဆောငျရှကျရနျ ခကျခဲတတျသညျ။ တပညျ့ကြေးကြှနျမြား တလှဲတခြျော ပွုလုပျတတျသညျ။ ညီအဈကို မောငျနှမမြားအကွား ပဋိပက်ခဖွဈတတျသညျ။ နှဈဖကျမိဘဆှမြေိူးသားခငျြးနှငျ့ မိတျသဂျဟမြား ကူညီထောကျပံ့ပေးခွငျးမြား ခံစားရမညျ။ ပြိူရှယျသူမြား ဖူးစာရှငျအသဈနှငျ့ တှပွေိ့း စစေ့ပျကွောငျးလမျးမြား ရှိမညျ။ သို့သျော အလောတကွီး ဆောငျရှကျခွငျးမြား မကောငျးပါ။ ပြိူရှယျသူမြား ဝေးကှာနသေူမြားနှငျ့ ပွနျလညျဆုံစညျးရကိနျး ရှိသညျ။ အိမျထောငျရှငျမြား သားသမီးမြား၏ သတငျးထူးမြား ကွားရမညျ။ ကနျြးမာရေးတှငျ အစား၊ အူလမျးကွောငျးရောဂါ၊ ဦးနှောကျနှငျ့ အာရုံကွော၊ အဆဈအမွဈကိုကျခဲခွငျးရောဂါမြား ခံစားရတတျသညျ။ အထူးဟော… စိတျလောကွီးပွိး တဈပါးသူ၏ လုပျငနျးမြား …
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက် ၇ ချက်
အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်း ဖြစ်စေနိုင်တဲ့ အချက် ၇ ချက် ပရိသတ်တွေ ကို ကျန်းမာရေးနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတလေး တစ်ခု ဖော်ပြပေး သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အရွယ်မတိုင်ခင် အိုမင်း စေတဲ့ အချက်လေးတွေ ပဲဖြစ် ပါတယ်။ ဒီအချက်တွေကို ရှောင်ရှား လိုက်နာမယ် ဆိုရင် နုပျိုပြီး အရွယ်တင်စေ မှာဖြစ်လို့ လိုက်နာ ကျင့်သုံးကြဖို့လည်း တိုက်တွန်းချင် ပါတယ်။ (၁) အိပ်ချိန် မမှန်ခြင်း အိပ်ချိန် မမှန်ခြင်းက အိပ်ရေးမဝခြင်းကို ဖြစ်စေပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝခြင်းက အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်းနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်း အားကို ကျဆင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အိပ်ရေးမဝရင် ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သွေးလည်ပတ် စနစ်ကို ကျဆင်းစေတဲ့ အတွက် အရေပြားရဲ့ …
မိန်းကလေးတိုင်း ဘဝမှာတစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့အရာများ
မိန်းကလေးတိုင်း ဘဝမှာတစ်ခါလောက်တော့ လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့အရာများ ကိုယ့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်နေကျ နိစ္စဓူဝ ကိစ္စတွေကနေ ခွဲထွက်ပြီး မတူညီတဲ့နေထိုင်မှုပုံစံတခုကို တခါ တရံလောက်ဖြစ်ဖြစ် ပြောင်းလဲ နေထိုင်လိုက်ကြည့်ခြင်းဟာ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးအတွက် အတော်လေး အထောက်အကူဖြစ်စေတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုပါပဲ ပျိုမေတို့ရေ …။ ဒါကြောင့်မို့လို့ ပျိုမေတိုင်းရဲ့ ဘဝမှာ တခါလောက်တော့ အနည်းဆုံးဖြစ်ဖြစ် လုပ်ကြည့်သင့်တဲ့ အရာလေးတွေကို ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်နော် …။ (၁) တယောက်တည်းခရီးတွေ ထွက်ပါ မိန်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ တယောက်တည်းခရီးသွားဖို့ဆိုတာဟာ အနည်းငယ်စွန့်စားရတဲ့ ကိစ္စတခုဆိုပေမယ့် တယောက်တည်းခရီးသွားခြင်းကနေ ထင်မထားလောက်တဲ့ အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရနိုင်တာကြောင့် လုံခြုံဘေးကင်းမယ်လို့ ထင်ရတဲ့ နေရာဒေသတခုခုကို တယောက်တည်း ခရီးသွားဖို့ပြင်ဆင်ပြုလုပ်ကြည့်ဖို့ အကြံပြုလိုက်တယ် …။ (၂) တရက်လောက် ဖုန်းမသုံးဘဲ …
မျက်နှာလှလှလေး အဆီတဝင်းဝင်းမဖြစ်စေဖို့ ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန် နည်းလမ်းများ
မျက်နှာလှလှလေး အဆီတဝင်းဝင်းမဖြစ်စေဖို့ ဆောင်ရန်/ ရှောင်ရန် နည်းလမ်းများ မျက်နှာအဆီပြန် တတ်တဲ့ အသားအရေများက ပူနေတဲ့ အချိန်ကာလတွေဆို သိပ်ကို စိတ်ညစ်ကြ ရပါတယ်။အရေပြားက သဘာဝ အဆီတွေကို ပုံမှန်အချိန်ထက် ပိုထုတ် တဲ့အပြင် အပြင်မှာ အရမ်းပူနေလို့ ချွေးက လည်း ထွက်၊ အရေပြားဆဲလ် အသေတွေက စုပုံနေ ချွေးပေါက်တွေက ကျယ်နေပြီးတော့ အညစ်အကြေးတွေ ပိတ်မိနဲ့ ဝက်ခြံပေါက် လိုက် ပျောက်လိုက် နဲ့ သံသရာက လုံးလည်ချာလည် လိုက်နေတော့ တာပါပဲ။ ဒါကြောင့် မျက်နှာအဆီ တဝင်းဝင်း ဖြစ်နေတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ခဏလေးနဲ့ ရှင်းလင်းသွားစေမယ့် နည်းလမ်းလေးတွေ ကို အခု လိုပဲ ဖော်ပြပေး …
Previous 1234567 8910 11 12 13 14 15 … 217 Next